भारतमा कोरोना भाइरसबाट एकै दिनमा २७५ को मृत्यु - ePosttimes
Homeअन्तर्राष्ट्रियभारतमा कोरोना भाइरसबाट एकै दिनमा २७५ को मृत्यु
११ चैत्र २०७७, बुधबार ०८:५३ अन्तर्राष्ट्रिय, कोरोना, समाचार 0
चैत-११, नयाँदिल्ली । भारतमा गत २४ घण्टामा कोरोना संक्रमणबाट २७५ जनाको मृत्यु भएको छ । थपिएका मृतकसँगै कुल मृतकको सङ्ख्या एक लाख ६० हजार ४४१ पुगेको केन्द्रीय स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मन्त्रालयले जनाएको छ।
चौबीस घण्टाको अवधिमा ४७ हजार २६२ जना थप व्यक्तिमा कोरोना संक्रमणको पुष्टि भएको छ । हालसम्म कुल संक्रमितको सङ्ख्या एक करोड १७ लाख ३४ हजार ५८ पुगेको मन्त्रालयले जनाएको छ । कुल संक्रमितमध्ये तीन लाख ६८ हजार ४५७ जनामा संक्रमण सक्रिय छ । एक करोड १२ लाख ५ हजार १६० जना संक्रमणमुक्त भएका छन् ।
भारतमा गत जनवरीमा कोभिडविरुद्धको खोप अभियान सुरु भए यता हालसम्म करिब पाँच करोडले कोरोनाविरुद्धको खोप लगाएका छन् ।
भारतीय चिकित्सा अनुसन्धान परिषद्का अनुसार सोमबारसम्म भारतमा २३ करोड ६४ लाख ३८ हजारभन्दा बढी व्यक्तिको कोरोना परीक्षण गरिएको छ । मंगलबार एकै दिनमा १० लाख २५ हजारभन्दा बढीको कोरोना परीक्षण गरिएको समाचारमा जनाइएको छ ।
515900cookie-checkभारतमा कोरोना भाइरसबाट एकै दिनमा २७५ को मृत्युyes
नयाँ दिल्लीमा २०० जना स्वास्थ्यकर्मीमा कोविड १९ संक्रमण अमेरिकामा कोरोना संक्रमितको संख्या १० लाखभन्दा बढी पुग्यो कोरोना संक्रमित संख्यामा भारत १० औं स्थानमा, मृत्यू संख्या ४ हजार माथी, संक्रमित १ लाख ३८ हजार नाघ्यो कोरोनाविरुद्ध चिनियाँ खोप टर्की र इन्डोनेसियामा परिक्षण प्रारम्भ, ब्राजिलमा पनि प्रयोग गर्ने निर्णय भारतमा दुई हप्ता लम्बियो लकडाउन, केही खुकुलो पारिने संक्रमितको संख्या बढेसँगै चीनमा फेरी लकडाउन अभिनेता सुशान्तले किन गरे आत्मह’त्या ? ६ वर्ष सँगै बसेकी उनको प्रेमिका अंकिताले के भनिन ! वीपीको कोभिड अस्पतालमा इटहरी-५ की संक्रमित महिलाको मृत्यु
मुलुकमै सबैभन्दा ढिलो भएको आयोजना मेलम्ची
रु रु जलविद्युतले प्रिमियममा आइपीओ निष्कासन गर्दै